A na-agbanwe ihe mmụta site na iji egwu porn | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Ndị mmadụ taa, karịsịa ndị na-eto eto, na-agbanye ha na smartphones. Mmetụta dị aṅaa ka nke a nwere na ikike ha nwere ịmụta, ịzụlite nkà nkwurịta okwu ma mara ụwa nke gbara ha gburugburu?
Ịghọta ihe mmụta bụ ihe dị mkpa iji ghọta otú ihe mere na ịntanetị nwere ike ịghọ nsogbu maka ahụike na ahụike. N'akụkụ a, Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ na-ele anya n'ịmụta site n'akụkụ dị iche iche.
Research egosi na ikiri ihe ndi ozo na - eme ihe dika 'ihe ojoo' bu ndi metutara ndi na - eto eto ndi nwere elu igbu oge igbu oge. Nke a pụtara na ndị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ anaghị enwe ike igbu oge maka afọ ojuju maka ụgwọ ọrụ bara uru karịa, dị ka ịga nke ọma n'ule. Kọleji na mahadum na-akọ ọkwa ọpụpụ dị elu n'ofe UK na ebe ndị ọzọ.
Kedu ihe ndị ọzọ na-agbada? Onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ Roy Baumeister n'akwụkwọ ya Ike na-ekwu na ihe ka ọtụtụ ná nsogbu ndị bụ́ isi, nke onwe na nke ọha mmadụ, bụ n'ihi ọdịda nke njide onwe onye. N'ime ihe ghọrọ otu n'ime akwụkwọ edepụtara edepụtara na akwụkwọ sayensị mmekọrịta ọha na eze, Baumeister chọpụtara na ike ga-arụ ọrụ dị ka akwara: enwere ike iwusi ya ike site na omume ma jiri ike gwụ ya. Ike glucose na-eme ka ike na-arụ ọrụ, ọ pụkwara ime ka ọ sie ike nanị site n'imeju ụbụrụ mmanụ n'ụbụrụ. Ọ bụ ya mere iri nri na ihi ụra — ma ghara ime nke ọ bụla n’ime ha — nwere mmetụta dị egwu na njide onwe onye (na ihe kpatara na ndị na-eri nri ji enwe oge siri ike iguzogide ọnwụnwa).
Onye prọfesọ University nke Stanford, Philip Zimbardo na-akọwa 'ịṅụ ọgwụ ọjọọ' ma na-ebelata mmezu nke agụmakwụkwọ na okwu a, Mmetụta nke Ndị Guy?
N'akụkụ a, Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ na-ele anya n'ịmụta site n'akụkụ dị iche iche.
• Nchekwa na Ịmụta
• Internet Pornography na Mmekọahụ mbụ Debut
• Na-agụghị akwụkwọ
• Ntanetị Intanet